Analakely : Sakoroka, olona efatra voatery nosavaina (Midi-Madagascar) | AEMW
Analakely : Sakoroka, olona efatra voatery nosavaina (Midi-Madagascar)
Raikitra indray ny sakoroka. Saingy tsy nisy baomba nandatsa-dranomaso nipoaka, tsy nisy fisamborana. Na izany aza nisy olona efatra voatery nosavain’ny mpitandro filaminana, omaly nandritra ilay hetsika nokasain’ireo vondron’olona mpikambana ao amin’ny Ako ho an’ny Fanavotam-pirenena (AFP).
Vao maraim-be, omaly, dia efa rakotra mpitandro filaminana avy eo anivon’ny Emmo/ Reg ny teny amin’ny faritra Analakely sy ny manodidina iny. Ao ireo milanja basy sy manao saron-tava, ao kosa ireo tsy mitana afa-tsy fiarovana sy “baton”. Mivezivezy sy misafo eran’ireo izay mety ho arabe rehetra mivoaka sy miditra teny an-toerana. Tsy nisalasala nisava ireo olona sy antokon’olona vitsivitsy, izay tsikaritra fa mety mampiahiahy ihany ireo. Niisa efatra izy ireo, raha ny tsikaritra teny an-toerana. Saingy tsy nahitana na inona na inona avokoa tany amin’izy ireo. Ny ramatoa iray aza, somary nifanenjehana mihitsy, teny akaikin’ny Tahala Rarihasina iny taorian’ilay karazana sakoroka kely. Rehefa nohodidinin’ireo mpitandro filaminana misaron-tava izy ka natao ny fisavàna. Tsy nahitana afa-tsy ireo lamba fotsy mirakitra sora-baventy maromaro tany aminy. Navela nandeha ihany ity ramatoa ity nony avy eo. “Tsy misy ny antony tokony hisamborana olona, raha tsy hoe mandika lalàna izy”, hoy ny nambaran’ireo tompon’andraikitry ny filaminana iray.
Raha tokony ho tamin’ny sivy ora tsy diso ny fotoana nifanomezan’ireo mpitarika ny fitakiana amin’ireo vahoaka, izay efa toa somary niandriandry teny an-toerana, hilatsaka ho eny amin’ny kianjan’ny 13 mey, dia azo lazaina fa mbola nilamina tamin’izay fotoana izay, ny toe-draharaha. Tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany latsaka dimy, teo no nanomboka ny fisavoritahana voalohany teny an-dohan’Analakely. Nanomboka ny siosiotsioka, ny horakoraka. Nanomboka namelatra ireo sora-baventy ihany koa ireo olona. Marihana fa tsy tazana teny an-toerana ireo lohadoham-pisorona mpitarika ity hetsika ity, eny fa ireo olona milaza fa manohana izany ihany koa aza. Na izany aza, miseho ho mafana fo ireo mpitolona ka saika niroso ihany hilatsaka eny an-kianja. Efa niatrana kosa tetsy an-danin’izay ireo mpitandro filaminana am-polony maro. Niezaka nanaparitaka ireo vondron’olona. Teo amin’ny adiny iray teo ihany no nifampihantsian’ny roa tonta. Ary rava tanteraka ny hetsika fotoana fohy avy eo. Nitsoaka nihazo ny tohatohabaton’Antaninarenina iny ihany koa ireo olona nisolo toerana ireo mpitarika. Taorian’izay dia azo lazaina fa nilamina ny teny an-toerana, ary niverina tamin’ny laoniny ny fifamoivoizana. Mbola hita miselontselona eny ihany anefa ireo fiara tsy mataho-dalana, marika “Nissan Hardbody” maitso, na fotsy, na manga an’ireo mpitandro filaminana.
The post Analakely : Sakoroka, olona efatra voatery nosavaina appeared first on Midi Madagasikara.
← Mahajanga – Polémique sur la tenue du THB Tour(Express)
BAD : De nouveaux visages à la tête de l’institution (Midi-Madagascar) →